दरवार हत्याकाण्ड : को थिए भविष्यवाणी गर्ने जोगी ? – Enayanepal.com
दरवार हत्याकाण्ड : को थिए भविष्यवाणी गर्ने जोगी ?
२०७७, १९ जेष्ठ सोमबार मा प्रकाशित
विसं २०५८ जेठ पहिलो साताको कुरा हो । बीपी पुत्र श्रीहर्ष कोइराला बालुवाटरस्थित कार्यालयमा व्यस्त थिए । खत्री थरका एक व्यवसायी हस्याङफस्याङ गर्दै आइपुगे । तिनताका श्रीहर्षका काका गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए भने उनी आफैँ पनि कृषि विकास बैंकका सल्लाहकार । कृषि र कुखुराको दाना उत्पादन गर्ने व्यवसायी कल्याण खत्रीले भने – ‘‘श्रीहर्षजी ! व्यवसायमा मलाई धेरै नोक्सानी भयो, कृषि विकास बैंकमा अलिकति ऋण छ मिनाह गराई दिनुपर्‍यो ।’’ श्रीहर्ष भन्दै थिए – ‘यार मैले कसरी मिनाह गर्न सक्छु ?’ धेरै कर गरेपछि उनले खत्रीलाई भनिदिए ‘‘ठीक छ निवेदन हाल्नुस् के गर्न सकिन्छ म प्रयास गर्छु ।’’
श्रीहर्षले भने – ‘‘कता जोगी (ज्यौतिषी) भेट्न जाने यार ! म परेँ आईटीको मान्छे । ज्योतिषीमा विश्वास छैन । किन भेट्नु ।’’ मनमनै उनी सोच्न थाले ‘‘कतै ज्योतिष भेटाउने बहानामा आफ्नो ऋण मिनाह गर्न मलाई प्रभावित गर्ने रणनीति त होइन ।’’
श्रीहर्ष चुपचाप बसिरहेका थिए । जोगीले झोलाबाट रातो रंग मिसिएको एक मुठी चामल निकाल्यो । मन्त्र गुनगुनाउँदै सोध्यो – ‘तपाइँको घरमा परेवा आउँछन् ?’
श्रीहर्ष : आएको त थाहा छैन !
श्रीहर्ष : छक्क पर्दै मनमनै (अब के उन्नति, कस्तो उन्नतिको कुरा गरेको होला ? मैले कुनै लाभको पद पाउने हो कि ? पैसा कमाउने हो कि ?)
जोगी : ठीक छ । घर जानू । मैले भनेको कुरामा ध्यान दिनू । तपाईँको देशमा ठूलो दुर्घटना हुनेवाला छ । आफ्नो काका (प्रधानमन्त्री) लाई एलर्ट गराउनु होला ।
उसको कुरा सुनेर श्रीहर्ष छक्क परे । लाग्यो ‘ल जसको घरमा बसेको छ, उसैलाई बाँच्दैन पो भन्छ बा !’
त्यसपछि श्रीहर्षले जोगीलाई सोधे – “हैन तपाइँलाई सबै कुरा थाहा छ भने आफैँ राजा र प्रधानमन्त्री (गिरिजावावु)लाई भेटेर यो सबै कुरा किन भन्न सक्नुहुन्न ?”
जोगी : राजा वीरेन्द्रले बोलाएरै त आएको हुँ । बेङलोरबाट । नत्र म जंगलमा बस्ने जोगी अहिले नेपाल किन आउथेँ ?
यस प्रसंगमा २०७२ साल साउन १५ मा श्रीहर्षले लेखकलाई सुनाए – ‘‘घर फर्किएपछि पत्नीलाई मात्र उसको भविष्यवाणी सुनाएँ । गिरिजाबाबुलाई भन्न सकिनँ । कस्तो बौलाहासँग संगत गर्दो रहेछ ? भनिदिनु होला भन्ने डरले । उसलाई भेटेको भोलिपल्टदेखि घरमा परेवा देखा परे । त्यसअघि कहिल्लै मेरो घरमा परेवा देखिएका थिएनन् । रुचिराले जोगीले पठाएको अक्षता परेवालाई दिन भनिन् ता कि तिनको संख्या गन्न सकियोस् ।’’
जोगीले भनेबमोजिम घरमा परेवाको हुल आउन थालेपछि एकाबिहानै श्रीहर्ष बालुवाटारतिर लागे । रिसाए रिसाउनुहुन्छ काका (प्रधानमन्त्री) सबै कुरा सुनाउँछु भनेर । त्यो दिन प्रधानमन्त्री कोइराला निवासबाट बाहिरिइ सकेका थिए । भेट हुन सकेन । देशको प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता हुने नै भयो । फेरि कुनै बेला भेट भयो भने भनौँला, भन्दै फर्किए उनी ।
केहीदिन श्रीहर्षले काकालाई भेट्न पाएनन् । विसं २०५८ जेठ १९ गते शुक्रबार राति प्रेम उपाध्यायले आत्तिएर फोन गरे – ‘‘दरवारमा गोली चल्यो रे को को मरे ? राजारानी मरे भन्छन् ।’’ राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्ष विश्ववन्धु थापाका नातेदार प्रेमको भनाइमा पत्यार लागेन । श्रीहर्षले भनिदिए ‘‘तिमी बौलायौ कि क्या हो ? यो राति खाएर नचाहिने कुरा गर्ने हो ?’’
बस ! श्रीहर्षको दिमाग बिजुलीको गतिमा घुम्न थाल्यो । आँखामा उही जोगीको अनुहार र भविष्यवाणीमात्र आइरह्यो । शुक्रवार नै दरवारका मान्छे मारिन्छन् भनेको थियो । त्यही भयो । श्रीहर्ष सीधै बालुवाटार पुगे । काकालाई भेट्न पाएनन् । फर्किए । मनमा लागिरह्यो – उसले सानोबुवामाथि ठूलो हमला हुनेछ भनेको छ । के होला कसो होला ? रातभर झिमिक्क नसुतेर बित्यो ।
अनि डीएसपी मिलन बस्नेतले समेत फायर खोले । स्थिति नियन्त्रणमा नआएपछि अंगरक्षक (क्याप्टेन) सुनील श्रेष्ठ एक हातले प्रधानमन्त्री कोइरालाको कम्मरमा समाएर जिउको सुरक्षा गर्दै अर्को हातले हवाई फायर गर्न थाले ।
त्यतिबेला चार तल्ला माथिबाट ढुंगा खसाउन लागेका एक युवकतर्फ श्रेष्ठको आँखा पुग्यो । चेतावनी दिँदै श्रेष्ठले रिभल्वर देखाए ‘…तँलाई उँडाई दिऊँ ?’ प्रधानमन्त्रीले भने – ‘गोली नचलाऊ है । गोली नचलाऊ ।’ श्रेष्ठले हवाई फायर खोलिरहे । गोलीको आवाजले शव यात्रा रणमैदान जस्तो बन्न पुग्यो ।
श्रीहर्षले सुनाए – ‘‘मैले गिरिजावावुलाई भेट्दासम्म चार दिनको अन्तरमा तीन राजाको नाममा शासन चलिसकेको थियो । सानोबुवा अझै टेन्सनमै हुनुहुन्थ्यो । मैले जोगीसँगको कुराकानी र त्यसपछिका घटनाक्रम सविस्तार सुनाए । उहा“ले भन्नुभयो – ‘‘तैले यो कुरा मलाई पहिल्यै किन नभनेको ? मैले भने – त्यति बेला मलाई डर लाग्यो सानोबुवा तपाइँले श्रीहर्ष बहुलायो कि क्या हो भन्नुहोला भन्ने । डरले भन्नै सकिनँ ।”
दरवार हत्याकाण्डको केही समयपछि कल्याण खत्रीको पनि हृदयघातका कारण निधन भयो । राजारानीको शवयात्रामा प्रधानमन्त्रीमाथि नियोजित आक्रमण भयो । बल्लतल्ल जोगिए । त्यसको एक महिना केही दिनपछि होलेरी घटनामा प्रधानन्त्री कोइरालाले राजीनामा गर्नु पर्‍यो र जोगीले भने झैँ त्यो घटना भएको करिब करिब दश वर्षमै गिरिजाबाबुको निधन भयो । साभार:बाह्रखरी